Askari ka tirsan Ciidamada Somaliland oo toogasho lagu dilay - Awdinle Online
Askari ka tirsan Ciidamada Somaliland oo toogasho lagu dilay
Maamulka Gobolka Awdal ee Soomaaliland ayaa faah faahin ka bixiyay iska hor-imaad khasaaro dhaliyay oo ka dhacay degaan ka tirsan Gobolkas, kaas oo lagu dilay askari ka tirsan Ciidamada Booliska Soomaaliland.
Iska hor-imaadka ayaa ka dambeeyay, kadib markii rag hubeysan ay weerar ku qaadeen ciidamo ku sugna Bar-koontorool oo ku taalla duleedka Magaalada Boorama, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal kooban.
Dagaalka ayaa waxaa la sheegay in uu salka ku haayo arrimo la xiriira is qabqabsi ku saabsan dhinaca dhulalka ah, sida uu Warbaahinta u sheegay guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin.
Wararkii ugu dambeeyay ee aan ka heleyno Magaalada Boorama ayaa waxaa ay sheegayaan in xaalada saaka ay tahay mid degan, isla markaana goobtii uu dagaalka ka dhacay ay ku sugan yihiin Ciidamo ka tirsan Booliska Soomaaliland.
Previous articleHindiya oo ku biirtay qorshooyin laga fuliyo Badda Soomaaliya
Next articleCC Sharmaarke oo si kulul uga hadlay doodda ka taagan magacaabis la’aanta Wa’iisul Wasaaraha
Jubbaland oo gacanta ku dhigtay qaraxyo iyo rag watay
Shacab careysan oo ku banaanbaxay Ciidanka Kenya
Wasiir Caadle oo soo bandhigay caqabado heysta Hir-Shabeelle
Akhriso:-Khudbadda Farmaajo Shirka Golaha Guud ee QM
Madaxda DFS & D/ Goboleedyada oo siwadajir ah u hortagaya labada Aqal
Maxay ka wada hadleen Guddoomiyaha Golaha Shacabka & Axmed Madoobe?
Hey’adda lacagta Adduunka oo soo saartay Warbixin la xiriirta deyn cafinta dalka